Mateu 18 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible 2009]
Nenguva iyo vadzidzi vakavuya kuna Jesu vakati: Ndianiko mukurusa paushe hwokudenga?
Jesu akadanira kwaari mwana muduku akamumisa pakati pavo,
Akati: Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Kana musingashanduki mukava savana vaduku, hamungatongopindi muushe hwokudenga.
Naizvozvo aninani unozvininipisa somwana muduku uyu ndiye mukurusa muushe hwokudenga.
Zvino aninani unogamuchira mwana muduku mumwe wakadai nezita rangu unogamuchira ini.
Asi aninani unogumbusa mumwe wavaduku ava vanotenda kwandiri, zvirinani kwaari kuti guyo rinoremesa risungirirwe pamutsipa wake, anyudzwe mugungwa pakadzika.
Inenhamo nyika, nemhaka yezvigumbuso! Nokuti zvinofanira kuti zvigumbuso zviuye hazvo; asi une nhamo munhu uyo unovuya nezvigumbuso!
Zvino kana ruvoko rwako kana rutsoka rwako zvichikugumbusa, uzvigure, urashire kure newe; zviri nani kwauri kuti upinde muupenyu uri chirema kana uchikamhina pakukandirwa mumoto wokusingaperi unamavoko maviri kana tsoka mbiri
Kana ziso rako richikugumbusa uridzure urashire kure newe; zviri nani kwauri kuti upinde muupenyu uneziso rimwe pakuti unameso maviri ukandirwe mugehena romoto.
Chenjerai kuti murege kuzvidza mumwe wavaduku ava, nokuti ndinoti kwamuri: Kudenga vatumwa vavo vanogarovona chiso chaBaba vangu vari kudenga.
Nokuti Mwanakomana womunhu wakavuya kuzoponesa chakarashika.
Munofungeiko? Kana munhu anezana ramakwai, rimwe rawo rikarashika, haangasiyi makumi mapfumbamwe namapfumbamwe, akaenda kumakomo kundotsvaka rakarashika here?
Kana zvikaitika kuti ariwana, zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Unorifarira kupfuvura makumi mapfumbamwe namapfumbamwe asina kurashika.
Nokudaro hakuzi kuda kwaBaba venyu vari kudenga, kuti mumwe wavaduku ava aparare.
Asi kana hama yako yakutadzira, enda umuvudze mhosva yake, iwe naiye muri moga; kana akakunzwa, watsiura hama yako.
Asi kana asinganzwi, tora mumwe kana vaviri newe, kuti shoko rimwe nerimwe risimbiswe nemiromo yezvapupu zviviri kana zvitatu.
Kana asina hanya nokuanzwa, uvudze kereke; kana asina hanya nokunzwa kereke, ngaave kwauri somuhedheni nomuteresi.
Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Chipi nechipi chamuchasunga panyika, chichasungwa kudenga; uye chipi nechipi chamunosunungura panyika, chichasunungurwa kudenga.
Zvekare ndinoti kwamuri: Kana vaviri venyu vakatenderana panyika pamusoro pechinhu chipi nechipi chavanokumbira, vachachiitirwa naBaba vangu vari kudenga.
Nokuti apo pakavungana vaviri kana vatatu muzita rangu, neni ndiripo pakati pavo.
Zvino Petro wakavuya kwaari akati: Ishe, hama yangu ichanditadzira kanganiko, ndikaikangamwira? Kusvikira kanomwe here?
Jesu akati kwaari: Handiti kwauri kusvikira kanomwe, asi kusvikira makumi manomwe; akapamhidzirwa kanomwe.
Naizvozvo ushe hwokudenga hwunofananidzwa nomumwe mambo, wakanga achida kuongorora varanda vake.
Zvino wakati achitanga kuongorora, mumwe akavuyiswa kwaari wakanga anechikwereti chamatarenda* anezvuru zvamazana zvinegumi.
Asi wakati achishaiwa chaangaripa nacho, ishe wake akaraira kuti atengeswe nomukadzi navana, nezvose zvaakanga anazvo, kuti muripo uitwe.
Naizvozvo muranda akawira pasi, akamunamata, akati: Ishe, ivai nomoyo murefu neni, ndichazokuripirai zvose.
Zvino ishe womuranda uyo akamunzwira tsitsi, akamusunungura, akamukangamwira chikwereti.
Asi muranda uyo wakati achibuda, akawana mumwe muranda \_add waibata\_add* pamwe chete naye, wakanga anechikwereti kwaari chamadhenari* anezana; akamubata, aka\_add mu\_add*dzipa, akati: Ndiripe chikwereti changu.
Zvino muranda uyo waibata pamwe chete naye akawira pasi patsoka dzake akakumbira zvikuru kwaari, akati: Uve nomoyo murefu neni, ndichazokuripira zvose.
Asi iye wakaramba, akaenda, akamuisa mutirongo, kusvikira achizoripa chikwereti.
Zvino vamwe varanda vaibata pamwe chete naye vakati vachivona zvakanga zvaitika, vakashungurudzika kwazvo, vakaenda kundovudza ishe wavo zvose zvakaitwa.
Zvino ishe wake wakati amudana, akati kwaari: Iwe muranda wakaipa, ndakakukangamwira chikwereti icho chose, nokuti iwe wakandigombedzera zvikuru.
Ko iwe hauzaifanira kunzwira tsitsi mumwe muranda \_add unobata\_add* pamwe chete newe, seni ndakakunzwira tsitsi here?
Zvino ishe wake akatsamwa, akamukumikidza kuvarwadzisi, kusvikira achizoripa zvose zvakafanira.
Saka saizvozvo Baba vangu vari kudenga vachakuitiraivo, kana musingakangamwiri mumwe nomumwe hama yake nomoyo yenyu yose.